5 သင့်အာမခံတွင် Big Save ဖို့သေချာနည်းလမ်းများ
အတော်များများတဦးချင်းစီနှင့်ပုဂ္ဂလိကမိသားစုများအမျိုးမျိုးသောအာမခံမူဝါဒစီမံကိန်းများ၏အလေးချိန်အောက်တွင်ကြောင့်မှားယွင်းကြပြီ, ဤသူတို့မိသားစုဝင်ငွေနှင့်လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုထိခိုက်နာ. သူတို့ကသေချာ stoutly သူတို့ရဲ့ပရီမီယံပေးဆောင်ခြင်း၏အရေးပါမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ပြုရအောင်, ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခြုံငုံဘဏ္ဍာရေးနှင့်မိသားစုလူနေမှုအဆင့်အတန်းပေါ်တွင်သူတို့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသူတို့အပေါ်မှာပျောက်ဆုံးကြသည်မဟုတ် - ဒါကြောင့်သူတို့ကရှိပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုများ၏အရည်အသွေးမထိခိုက်စေဘဲ၎င်းတို့၏အာမခံအစီအစဉ်များအပေါ်ကြီးမားတဲ့ကယ်ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုများအတွက် Scout ရန်လိုအပ်ပါတယ်. မိသားစုကျန်းမာရေးအာမခံအတွက်ပိုက်ဆံပေးခြင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ, နေအိမ်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအာမခံ, အော်တိုကားအာမခံ, အခြားသူများအကြားနှင့်အသက်အာမခံ, အဘယ်မိသားစုကိုဂရုစိုက်ဖို့ယူနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအိမ်မက်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုထုတ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကျန်ကြွင်းရလိမ့်မည်? ဤမေးခွန်း၏အဖြေကိုသင်အာမခံအပေါ်ကြီးမားတဲ့ကို save လုပ်ထားရတဲ့အကြောင်းရင်းအလေးအနက်ထား, အောက်ပါဘယ်လိုနေလဲ:
i. သင့်ရဲ့နှုတ်ယူပြီးသားမြှင့်တင်: သင်ကသင့်ရဲ့နှုတ်ယူပြီးသားမြှင်သို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ဖို့ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာသိ, သင် ... ဘူးလား? ဒါဟာသင်ထွက်-of​​ အိတ်ပမာဏကိုသင်အာမခံလျော်ကြေးရောက်စွက်ဖက်မှုကိုခိုင်လုံကြောင်းမတော်တဆအခြေအနေများအပေါ်ပေးဆောင်ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်တိုးမြှင့်တာကိုဆိုလိုတယ်. သင်သည်သင်၏နှုတ်ယူပြီးသားမြှင့်လာတဲ့အခါ, အာမခံကု​​မ္ပဏီများသည်သူတို့အပေါ်မှာလျော်ကြေးတောင်းဆိုမှုများ၏အဖြစ်အပျက်များကိုလျှော့ချသကဲ့သို့သင်တို့မြင်ရသူတို့အလိုအလျှောက်အလွန်တတ်နိုင်သောနှုန်းထားများဖို့သင့်ရဲ့ပရီမီယံကိုလျော့ချ - သင်မပါဘဲမလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုအစီအစဉ်များအပေါ်ကြီးမားတဲ့ကယ်ဖို့သင်ကို enable လုပ်ထားခြင်းကြောင့်ထမြောက်စေထုတ်ယူဆင်ခြင်ခြင်းမရှိဘဲဖြစ်နိုင်ပါပြီနိုင်ဘူး.
ii. အထူးလျှော့စျေးပေါ်မှာသင့်ရဲ့အေးဂျဆင့်ဆိုရမည်မှာ: သင့်အာမခံမူဝါဒနှင့်အစီအစဉ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးသင်တို့၏ပရီမီယံအပေါ်လျှော့နှုန်းကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီဘယ်လိုကြည့်ဖို့သင့်အာမခံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှစကားပြောပါ. လူအတော်များများကသိရှိခြင်းမရှိဘဲအာမခံဈေးလျှော့များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီ, သူတို့ရဲ့အာမခံကု​​မ္ပဏီတွေကသူတို့ရဲ့အေးဂျင့်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားမဟုတ်လျှင်သူတို့ကိုအကြောင်းကြားဖို့နောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်အကြောင်းမူကား, ထိုသူတို့အမြင့်ဆုံးမှုနှုန်းပေးဆောင်ခြင်းအပေါ်သွား. သင့်ရဲ့အေးဂျင့်သင့်ရဲ့အထူးလျှော့စျေးထွက်အလုပ်လုပ်နှင့်သင့်မူဝါဒနှင့်ကိုသင်အာမခံကု​​မ္ပဏီနှင့်အတူရှိသည်မူဝါဒစီမံကိန်းများပမာဏကိုမျက်နှာသာပေးကြောင်းစတဲ့အချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးကြီးတွေကိုကယ်တင်ရန်သင့်အားအကူအညီပေးသင့်.
iii. သင့်ရဲ့အကြွေးရမှတ်မြှင်: သင်ကမကောင်းတဲ့အကြွေးသတ်မှတ်ချက်ရှိသည့်အခါအာမခံကု​​မ္ပဏီများအာမခံကြီးကိုစွန့်စဉ်းစားပါ. အဘယ်အရာကိုသင်သိမပြုစေခြင်းငှါအာမခံကု​​မ္ပဏီကြီးများသည်သင်တို့အပေါ်မှာနောက်ခံအရောင်စစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်ပြီးသင့်အကြွေးဝယ်ရမှတ်သို့မဟုတ် ratings ဘယ်လောက်မြင်သောဖြစ်ပါသည်. သင့်ရဲ့အကြွေးရမှတ်များအလွန်နည်းပါးသည်ဆိုပါကသူတို့သည်သင့်အာမခံထားသည့်အခါ သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်မြင့်မားသောပရီမီယံနှုန်းကိုဆောင်နေကြတယ်, သင်သည်သင်၏အကြွေး ratings မြှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်သည့်အခါထိုအခါမူကား, သူတပါးတို့သည်သင်တို့၏ပရီမီယံနှုန်းထားများလျှော့ချပေး. သင်သည်ထိုသူတို့ပြုပြင်မီသင့်မကောင်းတဲ့ခရက်ဒစ်ရမှတ်များကြောင့်အလွန်မြင့်မားမှုနှုန်းကိုပေးဆောင်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်, ထိုသူတို့သည်လည်းချက်ခြင်းသင့်ကိုလျှော့ချပရီမီယံနှုန်းထားများဖြစ်ပေါ်လာအောင်နိုင်အောင် သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်ရာ၌အပြောင်းအလဲသူတို့ကိုအကြောင်းကြားရမည်.
iv. တူညီတဲ့ကုမ္ပဏီသုံးပါ: ဒီဘုံသဘာဝကျပါတယ်: အားလုံးသင့်မိသားစုအာမခံထားဖို့တူညီတဲ့အာမခံကု​​မ္ပဏီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီကိုသုံး, ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု, ကျန်းမာရေးနှင့်အခြားအရာ. သို့မဟုတ်အစား, အလားတူအာမခံကု​​မ္ပဏီနှင့်အတူအားလုံးသင့်ရဲ့ကားတွေအာမခံထား; အာမခံအားလုံးမိသားစုကျန်းမာရေးနှင့်အတူတူပင်အာမခံကု​​မ္ပဏီနှင့်အတူဆေးပညာဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ; အာမခံတူညီတဲ့အာမခံကု​​မ္ပဏီနှင့်အတူအားလုံးအိမ်နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုများကို, သင်တို့ရှိသမျှသည်ဤအာမခံမူဝါဒများအပေါ်ကြီးမားတဲ့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါလိမ့်မည်.
v. သင့်အိမ်နှင့်ကားများ Secure: အနိုင်အထက်မဆိုအဖြစ်အပျက်တွေ forestall ရန်သင့်နေအိမ်နှင့်ကားများအတွက်လုံခြုံရေး features တွေကိုနှင့် gadgets ကို install လုပ်ပြီး, ဖျက်လိုဖျက်ဆီးနဲ့ခိုး. မီးသတ်ဘူးတူလုံခြုံရေးပစ္စည်းတွေ, အနိုင်အထက် Alarm, ဆန့်ကျင်သော့ခတ်စက်ရုံများနှင့်အခြားလုံခြုံရေး features တွေကိုသင့်ရဲ့နေအိမ်နှင့်ကားများအတွက်ယာဉ်မတော်တဆမှု၏အဖြစ်အပျက်များကိုလျှော့ချသို့မဟုတ် minimize လို, သင့်အာမခံပရီမီယံအလိုအလျှောက်သင့်နှုန်းများကိုလျှော့ချမယ်လို့ကတည်းကဤအလှနျသင်ပိုက်ဆံချွေမယ်လို့.
Tags:5 သင့်အာမခံတွင် Big Save ဖို့သေချာနည်းလမ်းများ, Save Big On Your Insurance